Imibuzo evame ukubuzwa - Western Industry Co., Ltd.
Ingabe uyinkampani yokwakha noma yokuhweba?
Singabakhiqizi bamathoyizi ocansi aphambili kusukela ngo-2007, sinendawo engama-30,000 square meter nabasebenzi abangama-400, enezingxenye ezenziwe ngabicah kanye nama-micro-motors wokulawula izindleko kangcono nokulawulwa kwekhwalithi, gxila ku-R & D, ukulethwa kwesikhathi kanye nomshuwalense wekhwalithi oqinile.
Ngingathola isampula ngaphambi kokufaka i-oda?
Yebo, singahlinzeka ngamasampula amahhala cishe kuzo zonke izinto, kepha ukuthuthwa kwempahla kuseceleni kwakho. Iningi lamakhasimende ethu amasha lithanda ukubeka i-oda lesilingo ngqo ukuze livivinye ukusebenza nempendulo yokumaketha.
Izinsuku eziyi-10-25 ngemuva kokuqinisekiswa kwe-oda nokutholwa kwediphozithi, kwesinye isikhathi usuku lokulethwa luzoshintshashintsha ngobuningi be-oda nasesikhathini esiphakeme / seholide, ikakhulukazi ngaphambi / ngemuva kweholide le-CNY.
Ngabe izinto ziphephile? Noma yisiphi isitifiketi sabo?
Yebo, sisebenzisa imvelo izinto ezinobungane nge-premium grade grade silicone, non-toxic and free-phthalate. Sinezitifiketi ze-ISO 9001, RoHS, REACH, MSDS, Prop 65 ne-CE zayo yonke imikhiqizo.
Imvamisa, i-MOQ ingama-500pcs ephakheji ejwayelekile njengebhokisi lethu elingathathi hlangothi lesiNgisi noma isikhwama se-poly. Ngephakethe elenziwe ngokwezifiso, i-MOQ ingama-1000pcs njengoba kubuzwe ukuphakelwa kwephakeji. Kwesinye isikhathi, inani elincane elingaphansi kwama-500pcs nalo liyamukelwa uma kukhona okubekiwe. Sicela uxhumane nathi ukuze sixoxe ngento oyifunayo.
Ulawula kanjani ikhwalithi?
Sinomnyango we-QA ongaphezu kwabasebenzi abangama-25, zonke izigaba zemikhiqizo zilawulwa, zifaka izinto ezingenayo nokulawulwa kwekhwalithi, ukufakwa kwekhwalithi yenqubo yokufaka, ukulawula ikhwalithi kokugcina, ukulawulwa kwekhwalithi ephumayo.
Yini iwaranti yakho?
Ukushintshaniswa kwamahhala nokubuyiselwa emuva kwesiqinisekiso uma kuza nezinkinga zekhwalithi! Futhi unesibopho sakho konke ukuthunyelwa kwempahla yokuthumela impahla, Sicela uxhumane nathi ngaphambi kokubuya kwakho.
Yiziphi izinhlobo zemigomo yokukhokha oyamukelayo?
I-Paypal, i-T / T, i-Western Union, i-Alibaba lapho ibonwa iyatholakala.
Ingabe ukusekela OEM?
Yebo sisekela i-OEM ne-ODM, sineworkshop yethu yokubumba yokuthuthuka okusha komkhiqizo. Kuzungeze izinsuku ezingama-25 zento entsha ye-silicone nezinsuku ezingama-35 zento yepulasitiki.
Iyiphi indlela yokuhamba?
Ingahanjiswa ngolwandle, umoya noma ukuveza (i-UPS, i-DHL, i-TNT, i-FEDEX, njll.). Ungahlela ukulethwa ngomdlulisi wakho noma usicele ukuthi sihlele egameni lethu njengoba sinomenzeli wesikhathi eside wokuthumela ngezindleko ezinhle. Sicela uqinisekise nathi ngaphambi kokufaka i-oda.